I powder Orlistat emfutshane (96829-58-2) Abavelisi - Phcoker Chemical
I-powder Orlistat ephakamileyo kwinqanaba lemithi ebizwa ngokuthi i-lipase inhibitors esebenza ngokuvimbela ukunyuka kwe-25% yeenqatha ekudleni kwaye isetyenziselwa ukulahleka kwesisindo kubantu abadala abangaphezu komzimba, iminyaka engama-18 nangaphezulu, xa isetyenziswe kunye ne-calori eyancitshisiwe kunye ukutya okuncinci. I-powder Orlistat ephuhlileyo isilwanyana esilungiselelwe ukunyanyisa ukukhuluphala. Umsebenzi walo oyintloko ukhusela ukuxutywa kwamafutha ekudleni kwabantu, ngaloo ndlela ukunciphisa i-caloric intake. I-powder Orlistat ebomvu isebenza ngokuvimbela i-pancreatic lipase, i-enzyme ephula i-triglycerides emathumbu. Ngaphandle kwale enzyme, i-triglycerides esuka ekudleni iyakhuselwa ekubeni i-hydrolyzed ibe yi-fatty acids free acids kwaye ixutywe ngaphandle. I-Orlistat yomdaka ogqityiweyo wesigqirha isetyenziselwa abantu abangaphezu kwamandla amaninzi abangase babe negazi eliphezulu, isifo sikashukela, i-cholesterol ephezulu okanye isifo senhliziyo. Ukusebenza kwePowula okanye i-Orlistat powder ekunyuseni ukulahlekelwa kwesisindo kucacileyo kodwa kuthobekile. Idatha edibeneyo evela kwizilingo zeklinikhi ibonisa ukuba abantu banikezwa i powder Orlistat powder ngaphezu kwendlela yokuphila yokuguqulwa, njengokutya kunye nokuzilolonga, balahlekelwa malunga ne-2-3 kilogram (i-4.4-6.6 lb) ngaphezu kwalabo abangathathi iziyobisi ngaphezu kwexesha lonyaka. I-Orlistat powder i-Rawdat iyanciphisa ngokunyanisekileyo uxinzelelo lwegazi kwaye ibonakala ithintela ukuqala kohlobo lwe-2 sikashukela, nokuba sisuka kwindleko yesisindo ngokwaso okanye ezinye iziphumo. Iyanciphisa iziganeko zesifo sikashukela sohlobo II kubantu abanobukhulu besantya esilingana nomlinganiselo ofanayo wokuphila.
I-Orlistat powder iyinhlobo ye-lipase yokuvimbela ukulahlekelwa kwesisindo semfuyo kwaye i-hydrated derivative ye -postpost. I-Orlistat ngempumelelo kwaye ikhetha ukuvimbela i-lipase yesisu kunye ne-pancreatic lipase, ngelixa ingaba nefuthe kwezinye i-enzyme zokutya (ezifana ne-amylase, trypsin kunye ne-chymotrypsin) kunye ne-phospholipase, kwaye ayichaphazeli ukuxutywa kwe-carbohydrate, iprotheni kunye ne-phospholipids. Eli gciwane alixakwanga nangona i-tractinal tractinal and has a effect reversible effect on lipase. I-Orlistat ikhubaza i-enzymes ngokuzibophelela ngokukhawuleza kwiindawo zokuhlala zesithensi kwiindawo ezisebenzayo zesisu ne-pancreatic lipase. Oku kuvimbela amanqatha ekudleni ukuba aphule kwi-fatty acid acids kunye ne-diacylglycerol, ngoko ayikwazi ukuxhamla, ukunciphisa i-caloric intake kwaye ngoko ke ukulawula umzimba. Esi sidakamizwa asikho isidingo sokuba sithathwe ngumzimba wonke ukuba siphumelele. Umsebenzi we-Orlistat we-pharmology ngumxholongwane oxhomekeke kuwo: i-Orlistat yonyango (i-120mg / d, i-tid, esithathwe ngokutya), idibene ne-calorie ephantsi, inokunciphisa i-30% ye-fat absorption. Kwisifundo ngokuthelekisa izisebenzi zokuzithandela eziqhelekileyo, i-Orlistat yayingabandakanywa ngumzimba nonke kwaye ibe nexinzelelo legazi eliphantsi kakhulu. Emva komlinganiselo omnye womlomo (i-800mg enkulu), ukuxilongwa kwegazi lwe-Orlistat kule ilandelayo iiyure ze-8 kwakukho <5 ng / ml. Ngokuqhelekileyo, imilinganiselo yonyango ye-Orlistat ixhaswa ngumzimba kuphela kwaye ayiyi kuqokelela kwixesha elifutshane lonyango. Kuvavanyo lwe-in vitro, i-Orlistat yezinga lokubopha kunye nezinye iiprothini ze-serum zidlulile i-99% (iiproteni ezibophekileyo ziyi-lipoproteins kunye ne-albumin), kunye nezinga lokubopha kunye neeseli ezibomvu zegazi zaziphantsi kakhulu.
▪ I-Orlistat iyanciphisa umzimba ubuninzi ngaphezu kwe-20% kwiindleko zomzimba
▪ I-Orlista ikunceda ufunde indlela yokubala iekhalori
▪ I-Orlista ikunika umvakalelo wokuphila
▪ I-Orlista ineempembelelo ezilungileyo zinika ithemba kunye nolonwabo kubasebenzisi
▪ I-Orlista inikeza iziphumo ezizinzileyo zexesha elide
▪ I-Orlista iyanciphisa ubunzulu bezifo ezinjenge-hypotension, isifo sikashukela, i-atherosclerosis kunye
Ngenxa yokuba i-Orlistat powder iboniswe ukunciphisa ukuxutywa kwamavithamini amaninzi kunye ne-betacarotene, abantu kufuneka bacebise ukuba bathathe i-multivitamin equkethe amavithamini anelumnyoli enomzimba ukuqinisekisa ukutya okwaneleyo. Ngaphandle, i-vitamin supplement kufuneka ithathwe ubuncinane kwiiyure ze-2 ngaphambi okanye emva kokulawulwa kwe-Orlistat powder, efana ngexesha lokulala.